Enjehin’i Shina amin’ny anaran’ny Marxisma ireo elatra havia mahaleotena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Janoary 2019 6:14 GMT
Vakio amin'ny teny Español, ਪੰਜਾਬੀ, Italiano, Ελληνικά, русский, English
Programan'ny China Central Television “Marina ny tenin'i Marx.” Pikantsary avy amin'ny Youtube.
Nosamborin‘ny polisy tamin'ny 28 desambra lasa teo ny vondrona mpianatra tao amin'ny Oniversiten'i Peking noho ny fihetsiketsehan-dry zareo manohitra ny fakana an-keriny ny campus-n'ny fikambanana Marxista ao anatin'ny tarazo azo avy amin'ny lavaka lalina dia lalina mampisaraka ny Marxisma amin'ny Marxisma “ahitana ny mampiavaka ny an'ny shinoa.”
Nanaraka taorian'ny hetsika ny fihazonana ny filohan'ny fikambanana Qiu Zhanxuan tamin'ny fankalazana ny tsingerintaonan'i Mao Zedong, mpitarika ny Antoko Komonista Shinoa (CPP) teo aloha tamin'ny 26 desambra.
Ny fisamborana tamin'io fotoana io no famoretana vao haingana indrindra ataon'ny CPP amin'ireo Shinoa elatra havia mahaleotena. Tamin'ny volana aogositra, olona 50, nahitana mpianatra sy mpiasa, izay nikasa hanangana sendika tao amin'ny ozinina teknolojika Jasic tao Shina atsimo no nosamborina.
Anisan'ny voahazona i Yue Xin, nahazo diplaoma tao amin'ny Oniversite Peking izay nanambara ampahibemaso ny fanohanany tanteraka ny hevitry ny Filoha Xi Jinping. Raha tokony hanohy ny fianarana any ivelany ity tovovavy ity dia lasa mpiasa miakanjo manga (izany hoe mpiasa madinika) tao amin'ny ozinina Jasic. Tsy tonga niasa izy hatramin'ny hetsika nataon'ny polisy tamin'ny volana aogositra. Nanao fanentanana ny amin'ny hamotsorana ireo mpikatroka voahazona ireo ny vondrona Marxista tao amin'ny Oniversite Peking.
Nampangain'ny mpaneho hevitra pro-governemanta ireto tanora elatra havia taranaka indray mihira vaovao mampihatra ny soatoaviny ireto ho mamaky ny bokin'i Marx ho eo ambany fitarihan'ny hery vahiny.
Ao amin'ny Weibo, Hu Xijin, ideôlôgin'ny CCP sady lehiben'ny toniam-panoratana ao amin'ny Global Times, nanamarina ny fanenjehana ny vondrona marxista ao amin'ny Oniversite Peking, izay nosoloina ho ireo notsingatsinganin'ny oniversite ny mpikambana mpitarika ao aminy avy eo.
Te-hiteny amin'ny mpianatra Qiu aho fa i Shina irery ihany no afa-manavotra ny sosialisma. Shina irery ihany no fanantenana tokana amin'ny hoavin'ny Marxisma. Miatrika fanamby mary ato anatiny sy avy any ivelan'ny firenena i Shina amin'izao fotoana izao. Ny vahoaka Shinoa rehetra izay mandray ny idealy sosialista dia tokony hanohana ny fanjakana handeha amim-pitokisana ny lalan'ny sosialisma amin'ny endrika shinoa ary hanohana ny fampivoaran'ny marxisma ao ambanin'ny toetra fihavaozana sy ny varavarana misokatra. Sarotra dia sarotra ny mampihatra ny sosialisma, tsy fanarahana dogmatika na idealistika izany. Efa raiki-tapisaka hatramin'ny farany fa miankina amin'ny anjara hoavin'i Shina ny anjara hoavin'ny sosialisma. Manantena aho fa hahatsapa izany ny tanora rehetra. Miditra amin'ny karazana varavarana misokatra rehetra ny hery tsy namana hanafihana antsika. Mila misoroka amin'ny famohana varavarana toy izany ho an'ireo hery ireo isika.
Ny fanambaràna nataon'i Hu no taratry ny fakan'i Shina vao haingana ny marxisma ho fitaovana ara-potokevitra manampy amin'ny fametrahana ho ara-dalàna sy ara-drariny ny paika fitondran'ny Filoha Xi Jinping izay mifototra amin'ny tsirefesimandidy sy ny fivoarana ara-toekarena.
Nandritra ny taona 2018, nankalaza tamin'ny fomba manetriketrika ny tsingerintaona faha-200 an'i Karl Marx, rain'ny fotokevitra komonista, ny Antoko Komonista Shinoa. Nanomana kaoferansa akademika iraisampirenena tao Bejing, nanomana fivoriana lehibe tao amin'ny antoko, nanorina tsangambato goavana tao tamin'ny tanàna nahaterahan'i Marx tany Alemaina, namokatra andiam-pandaharana fahitalavitra ho an'ny tanora mitondra ny lohateny hoe “Marina ny tenin'i Marx,” ary ny vao haingana indrindra dia ny famoahana andian-tsarimiaina mitondra ny lohateny hoe “The Leader” (Ilay Mpitarika) izay mifototra amin'ny fiainan'i Marx.
Ny andiam-pandaharana misy fizarana dimy “Marx was right” [marina ny tenin'i Marx], navoaka tao amin'ny fahitalavi-panjakana lehibe indrindra ao Shina, mandresy lahatra fa ny toekarena miankina amin'ny tsena tanterahin'i Shina dia “fitaovana hanatanterahana ny soatoavina sy ny tanjon'ny sosialisma” ary fanafodin'ny krizy tahaka izay atrehin'ny demaokrasia tandrefana tamin'ny taompolo lasa, nanomboka tamin'ny krizy ara-bola manerantany tamin'ny taona 2008 ka hatramin'ny referandaoma Brexit tao amin'ny Fanjakana Mitambatra.
Araka ny nametrahan'i Xi azy tamin'ny fankalazana ny tsingerintaona faha-200 nahaterahan'i Marx tao Beijing tamin'ny volana Mey:
Mety indrindra amin'ny tantara sy amin'ny vahoaka ny misafidy ny marxisma, ary ho an'ny CPP ny manoratra ny Marxisma amin'ny sainany, manaraka ny fitsipiky ny fampiarahana ny fitsipika fototra amin'ny marxisma amin'ny zavamisy ao Shina, ary manohy amin'ny fampanaraham-bolontany ny marxisma amin'ny tokotany sy (vanim-)potoana shinoa.
Mihoatra ny 30 ireo mpampianatra ambony malaza no nanapa-kevitra ny hanao ankivy amin'ny Kongresy Manerantanin'i Beijing taona 2019 momba ny Marxisma, ka ao anatin'izany ilay profesora elatra havia Noam Chomsky, izay nilaza fa tsy te-ho “mpiray tsikombakomba amin'ny lalaon'ny governemanta shinoa.”
I Shina no firenena lehibe indrindra amin'ny sokajin-toekarena faharoa (fananana ozinina manodim-bokatra) sady mpampiasa vola iraisampirenena lehibe indrindra eto ambonin'ny tany, ary miankina be dia be (sady manambaka?) ny sarangan'ny mpiasa ny toekarenany.
Mampiverina any amin'ny taompolo maromaro lasa any ny fomban'ny CCP hamotika ny hetsika mahaleotenan'ny sendika sy ny fikambanan'ny mpiasa. Raha maro amin'ireo Marxista ireo no matoky ny tolon'ny mpiasa ho hery mpitarika mankany amin'ny fanovana ara-tsosialy sy politika, ireo ideôlôgy shinoa kosa mihevitra ireto tanora elatra havia izay miara-mijoro hitaky ny zon'ny mpiasa ireto ho mpanakorontana.
Taorian'ny fakana ankeriny ny fitantanana ny fikambanana Marxista tao amin'ny Oniversite Peking ity no nisiahan'ny mpisera Twitter @luli398 hoe:
Raha mbola velona i Marx, dia ho nosamborin'ny CCP izyary higadra mandrapahafaty satria nanandrateny ho amin'ny fahalalahan'ny gazety, fitenenana ary fisaina izy.
Inona marina moa ity Marxisma ahitana ny endrika mampiavaka ny shinoa ity? Mety hahita ny topimason'izany ianao amin'ny alalan'ity sarimiaina propagandy antsoina hoe “The Leader” (Ny Mpitarika) ity.